အရုပ်ကြိုးပြတ်နေ့ရက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အရုပ်ကြိုးပြတ်နေ့ရက်များ
Posted by သူရဿဝါ on Jul 16, 2010 in News |2comments
ငါ့….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ..
.. ကိုယ်….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
….. ငါ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
… ….. ခ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..
… ….. … ….. ….. ….. ဏ…………..
. ….. ….. … …..တ….. ….. ….. …..
… …..ဖြုတ်….. ….. ….. ….. ….. ….. .
…… …..ပျောက်….. ….. ….. ….. …..
……. ….. ….. ….. ….. ….. ဆုံး….. ….
… … ….. …..သွား….. ….. ….. ..
… …….. ….. ………. …..တယ် ..
ဘ၀က ဖိနပ်ကို ကြိုးငုံ့ ချည်နေတုန်း …….. မစံပယ်ဖြူက ကျွန်တော့်ကို မုန်းသွားသည်….
ရေရွတ်ကြည့်တော့ လေထုထဲ တိုး–အက်—မော–လျ ….
ချစ်လှစွာသော… ငါ့ရဲ့ညီမသေးသေးလေးရေ…လွမ်းတယ်၊ … ဒါပဲ တတ်နိုင်တာမို့ လွမ်းပါရစေ
ကောင်မလေးရေ….တို့တွေ နားလည်လိုက်ရအောင် မင်းနဲ့ငါ တကယ်နားလည်သွားသလိုပုံမျိုးနဲ့ နားလည် ပစ်လိုက်ကြရအောင်လေ………………..
ခြေထောက်တွေကလှေကားထစ်အတိုင်းတက်သွားပြီး လူက… လှေကား ခြေရင်းမှာ ကျန်ခဲ့ရတယ်
ဗျပ်စောင်းသံရဲ့ တိတ်ဆိတ်မှု့က ငါ့ကို ခေတ်အဆက်ဆက် ခြောက်လှန့် … ငါတို့တွေ ကြိုးပြတ်နေကြပြီ ၊၊ ငါတို့တွေ ကျိုး ပျက် နေ ကြ ပါ ပြီ
ပြောပါ … ငါ ရပ်နေရမှာလား ၊ ဆက်လျှောက်ရမှာလား ဆိုတာကို..
ငါ့ကိုဖျောက်ထားတဲ့ နှင်း …
မိုင်တိုင်တွေ လဲကျတုန်း ငါ့ကိုကယ်ပါ …
ညတွေပျင်းရိတုန်း ငါ့ကိုကယ်ပါ …
ပြီးရင်… ငါ့ကို ကယ်ပါ …. ပြီးရင် ….
၀န်ခံချက် – ယခုကဗျာတွင် တာရာမင်းဝေ ၊ မင်းခိုက်စိုးစန် ၊ တိုးနှောင်မိုး ၊ ဇာတိ ၊ သိုးမဲ၊ သူရဿဝါ၊ ၊ ၀ိုင်ချို ၊ သောတ ၊ ပိုင်စိုးဝေ ၊ ရွှေယုန် ၊ ရုပ်သေး တို့၏ ကဗျာစာပိုဒ်အချို့ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါသည်။
တေလေနာမည်လည်း ပါသေးတယ်လား ကျန်သေးလား ….
ငါ့နာမည်ခေါ်တဲ့ ဓါးတချောင်းရင်ဘတ်ထဲကို ထိုးသွင်း
ကဗျာကို …. ဟုတ်ကဲ့ ကဗျာလို ခံစားလိုက်ပါတယ်
အငွေ့ အသက်လေး တောင် အသိအမှတ်ပြုမခံရ……
ကျွန်တော်လည်းစိတ်မှာ အလာ့ဂျစ် ဖြစ်နေပါတယ်
အင်္ဂါဂြိုလ်က အရှက်ကွဲတတ်တယ်လို့ ဆရာဦးကြာမြင့်ရေးတာဖတ်ရတယ်
လှည့် စားခံရတယ်လို့ သိရတယ် နှလုံးသားမှာ အလာ့ဂျစ်ဖြစ်နေတယ်